डा. केसीकाे आईसीयूमै अनशन जारी – KhabarPurwanchal
डा. केसीकाे आईसीयूमै अनशन जारी
खबर पूर्वाञ्चल, २२ असार २०७५, शुक्रबार ०७:१३
काठमाडौँ /अनशनको छैटौं दिन डा. गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) को ‘आईसीयू’ मा राखिएको छ ।
उनले आईसीयूमै अनशन जारी राखेका छन् । पाँच दिनसम्म कभर्डहलमा अनशन बसेका उनलाई बुधबार उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएको थियो ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकीय टोलीका संयोजक डा. प्रवीण गिरीका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिर छ । ‘उहाँले सघन उपचारकक्षमै अनशन जारी राख्नुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘हामीले उपचार पनि गरिरहेका छौं ।’ अस्पतालमा सघन उपचारकक्ष नभए पनि सोहीसरहको सेवासुविधा व्यवस्था गरी डा. केसीको उपचार भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
मेडिकल डाइरेक्टर डा. पूजन रोकायाले उनको उपचारमा एक डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको बताए । ‘अब जतिसक्दो छिटो आईसीयू सेवा सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उपचारको प्रबन्ध मिलाइरहेका छौं ।’
सरकारी चिकित्सकसँग उपचार गर्न मानेनन्
डा. केसीले सरकारले पठाएका चिकित्सकसँग उपचार गराउन अस्वीकार गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा.जीवन थापा र एनेस्थेसिया एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट डा.सुवास रेग्मीलाई केसीको उपचार गर्न जुम्ला पठाएको छ ।
तपाईंहरूको आवश्यकता छैन, फर्के हुन्छ भनेर सरले सरकारी चिकित्सा टोलीलाई भन्नुभयो,’ रोकायाले भने । हाल केसीको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाले अन्य संक्रमणको सम्भावनासमेत बढेको उनले बताए । आमरण अनशनको छैटौं दिन बिहीबार उनको टोटल ब्लड काउन्ट तीन हजारमा झरेको छ भने किटोन पोजेटिभ देखिएको छ ।
यसैबीच डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालले केसीको स्वास्थ्य गम्भीर रहेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार हुन अपिल गरेको छ । सोसाइटीले डा.केसीको माग पूरा नभए कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेसमेत जनाएको छ ।
जीवनरक्षा गर्न आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका तर्फबाट प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्योपचारजस्तो आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा उठाइएका मागप्रति संवेदनशील भई केसीसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गर्न माग गरिएको छ । आयोगले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकप्रति सचेत रहँदै कुनै पनि पक्षबाट कतै पनि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न/नगराउनसमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केसी असार १६ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् ।
जुम्ला पुगे तीन सांसद
डा. केसीलाई समर्थन गर्न कांग्रेसका तीन सांसद जुम्ला पुगेका छन् । बिहीबार दिउँसो जुम्ला पुगेका प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही र दीनबन्धु श्रेष्ठले डा. केसीलाई भेटी उनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सांसद रसाइलीले गरिब विद्यार्थीका लागि र दुर्गम क्षेत्रका लागि आवाज उठाएकाले डा. केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन जुम्ला पुगेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार छापेको छ ।